Wararka Maanta: Sabti, Feb 2 , 2013-Madaxweynaha Soomaaliya oo howlo shaqo u jooga London
Kulamadaan ayaa waxaa Madaxweynaha kala qeybgalay R/Wasaare ku xigeenka, ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Marwo Fawziyo Yusuf Adam,Wasiirul Dowlaha Madaxtooyadda Faarax Sh. Cabdulqaadir, la-taliyayaasha Madaxweynaha, iyo saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya.
Wafdiga ayaa waxaa saaka qaabilay saraakiisha ugu sarreysa xagga amniga ee dowladda Ingiriiska, waxaana halkaas looga hadlay qaabkii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa nabadda, Amniga ayaa wuxuu kow ka yahay Lixda tiir Sayaasadeed ee dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmay hey’adda u qaabilsan dowladda Ingiriiska, dhanka horumarinta.Goobtaas wuxuu Madaxweynaha ka sharaxay qaabka ay dowladda Federaaalka Soomaaliya ku dooneyso in ay u geyso geeyso adeega bulshada gobolladda dalka oo dhan.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tukaday Masaajidka Islamic Cultural Center, halkaasna uga mahadceliyay maamulka masjidka, adeegga ay u hayaan Muslimiinta ku nool dalka Ingiriiska.
Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya